CrowdTwist waxay bixisaa madal calaamadeysan oo cad, horumarsan Analytics iyo dhammaystir suunka maareynta iyo qalabka warbixinta si aad u dhexgasho, u bilowdo, u maareyso, oo aad u siyaadiso dadaalladaada sumcadeed. Waxaan dhawaan wareysi weyn la yeelanay Irving Fain on Edge-ka Webka Raadiyaha waxayna na siisay aragti ku saabsan shirkad runtii saameyn ku leh suuq geynta ganacsiga iyo abaalmarinta.
Haddii aad rabto inaad aragto sida wanaagsan ee la isugu duubay, olole qaran ayaa loo fuliyaa, haka fogeyn daraasadda kiiska C FactdTwist ee X Factor. Iyada oo daawadayaal ka badan 8.5 milyan oo qof, Fox's The X Factor wuxuu rabay inuu helo habab cusub oo lagu soo jiito daawadayaasha kahor, inta lagu jiro iyo kadib bandhigga.
Ololuhu wuxuu rabay in lagu kaxeeyo barnaamijyada barnaamijyada moobiilka iyo sidoo kale in la kordhiyo dhagaystayaasha dhaqdhaqaaqa bulshada laga sameeyo ee ku baahsan bogaggooda Facebook iyo astaamaha Twitter Ugu dambeyntiina, Fox waxay rabtay inay bixiso soo-gaadhis dheeraad ah iyo fursado dhiirrigelin qiimo leh oo loogu talagalay bandhigyada hoggaamiyeyaasha maal-galiyayaasha oo ay ku jiraan Pepsi, BestBuy iyo Verizon.
Taageerayaashu waxay awoodeen inay dhibcohooda ku furtaan abaalmarino kala duwan oo ay ku jiraan kuwa Twitter-ka caan ka ah oo laga soo xigtay garsoorayaasha bandhigga, badeecad xaddidan oo xadidan iyo elektaroonig macaamiil dalab badan leh oo ka yimid la-hawlgalayaasha bandhigga. Barnaamijkan cusub wuxuu Fox siiyay wiishashyo aan horay loo arag oo ku saabsan ka qayb qaadashada daawadayaasha, waxqabadka shaashadda labaad, isdhexgalka bulshada iyo soo degsashada moobiilka, iyo sidoo kale qiime koror iyo soo-gaadhista maal-galiyayaasha kala duwan ee bandhigga.